The Essence: ပါဠိစာပေ၊၊ ၊၊
အရှင်ရေးခဲ့သမျှ ဆောင်းပါးနှင့် စာတမ်းများထဲတွင် ‘ပါဠိစာပေ’ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို စာဖတ်သူများ အကြိမ်များစွာ တွေ့ခဲ့ကြပါသည်၊၊
ပါဠိစာပေအကြောင်း မိတ်ဆက်စာတမ်းကို ယ္ခုတင်ပြလိုက်ပါတယ်၊ “အလင်း စက်” စာဖတ်သူများ ပါဠိစာပေဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများစွာ ရလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်၊၊ ပါဠိစာပေ မည်မျှကျယ်ပြန့်သည်ဆိုသည်ကိုလည်း စာရှုသူများ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊၊
ပါဠိစာပေတခုတည်းကိုပင် နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှာ တက္ကသိုလ်ကြီးများ ဖွင့်လှစ်၍ သင်ယူနေကြရပါ တယ်၊၊ ပါဠိစာပေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတတ်ပညာများအကြောင်း၊ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ၊ အတွေး ခေါ်ပညာဆိုင်ရာများ၊ စီးပွားရေးအကြောင်း၊ လူမှုရေးအကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအယူအဆများအကြောင်း၊ ဘာသာကိုးကွယ်မှု အကြောင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တင်ပြထားပုံများသည် ယနေ့ခေတ်ပေါ် ပညာရပ် များထက် အဆင့် မနိမ့်ကြောင်းကိုလည်း များစွာသော ခေတ်ပညာရှင်၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တို့ အသိမှတ်ပြုကြပြီး ဖြစ်သည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့လက်ထက်က အန္ဒိယနိုင်ငံမှာ တိုင်းကြီး(၁၆)တိုင်း ရှိတယ်လို့ အန္ဒိယနိုင်ငံသမိုင်း များမှာ ဖော်ပြပါတယ်၊၊ ထိုတိုင်းကြီး(၁၆)တိုင်းထဲမှာ ဥဇ္ဇေနီပြည်နှင့် မာဂဓတိုင်းတို့မှာ ပါဠိဘာသာစ ကားကို နိုင်ငံတော်ရုံးသုံး ဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်တဲ့၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း ဘုရားရှင်သည် မာဂဓတိုင်းမှာ အနေများတာကို တွေ့ရပါတယ်၊၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်အနေဖြင့် သူအနေများသည့် မာဂဓတိုင်းဘာသာစကားဖြင့် များစွာ သော တရားတော်များကို ဟောကြားခဲ့လိမ့်မည်ဟု ပါဠိသုတေသီတို့ ခန့်မှန်းကြပါသည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင် အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီး(၄၅)နှစ်ကြာ ဟောပြောသင်ပြခဲ့သမျှကို ပါဠိစာပေဟုခေါ် ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ ဟောပြော သင်ပြချက်များဖြစ်သောကြောင့် ဗုဒ္ဓစာပေဟုလည်း ခေါ်ပါသည်၊၊ ပါဠိစာပေသည် ကျယ်ပြန့်လွန်းအားကြီးလို့ အပိုင်းကြီး သုံးပိုင်းခွဲထားရပါတယ်၊၊ အပိုင်းကြီးသုံးပိုင်းဆိုတာ---
(၁) ၀ိနယ ပါဠိစာပေကဏ္ဍ၊
(၂) သုတ္တန္တ ပါဠိစာပေကဏ္ဍ၊
(၃) အဘိဓမ္မာ ပါဠိစာပေကဏ္ဍ၊ တို့ဖြစ်ပါတယ်၊၊
၀ိနယ ပါဠိစာပေဆိုတာကိုပဲ “၀ိနယ ပိဋက”လို့ခေါ်တွင်ပါတယ်၊ သုတ္တန္တ ပါဠိစာပေကို “သုတ္တန္တ ပိဋက” လို့ ခေါ်ပါတယ်၊ အဘိဓမ္မာ ပါဠိစာပေကိုတော့ “အဘိဓမ္မာပိဋက”လို့ခေါ်ပါတယ်၊၊ ပေါင်းလိုက်ရင် “တိပိဋက ပါဠိစာပေ”ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်၊၊ ဗုဒ္ဓစာပေလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်၊၊ မြန်မာလိုအားဖြင့် ပိဋကတ်သုံးပုံလို့ ခေါ်ကြပါတယ်၊၊
(က) ၀ိနယ ပိဋကမှာ အုပ်ရေ (၅)အုပ်၊ စာမျက်နှာပေါင်း (၂၂၆၀)ရှိပါတယ်၊၊
(ခ) သုတ္တန္တ ပိဋကမှာ အုပ်ရေ (၂၃)အုပ်၊ စာမျက်နှာပေါင်း (၁၀၈၉၈)ရှိပါတယ်၊၊
(ဂ) အဘိဓမ္မာ ပိဋကမှာ အုပ်ရေ (၁၂)အုပ်၊ စာမျက်နှာပေါင်း (၃၅၉၇)ရှိပါတယ်၊၊
စုစုပေါင်း ပိဋကသုံးပုံမှာ စာမျက်နှာပေါင်း (၁၆၇၅၅)ရှိပြီး၊ နှစ်လက်မခန့်ထူသည့် ဆိုက်ကြီးစာအုပ် ပေါင်း(၄၀)နှင့် ကျမ်းအရေအတွက်(၅၃)မျှ ရှိပါတယ်၊၊ ပိဋကသုံးပုံတွင် သုတ်(stories)ပေါင်း (၄၀၀၀၀) ရှိသည်ဟုလည်း မှတ်သားရပါသည်၊၊
“၀ိနယပိဋက”မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်က သာသနာတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြတဲ့ ရဟန်းတော်များနှင့် ရဟန်းအမျိုးသ္မီးများအတွက် လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများကို သင်ပြထားပါတယ်၊၊ “သုတ္တန္တ ပိဋက”မှာ စီးပွားရေး လူမှုရေး နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာတရား ကျင့်ဝတ်များ၊ ပညာရပ်အမျိုးမျိုး၏ အကြောင်းများ၊ ဗုဒ္ဓခေတ် အန္ဒိယနိုင်ငံ အတွေးအခေါ်များ၊ သိပ္ပံပညာအကြောင်းများ၊ ဆေးပညာအတက်များစသည့် အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးကို ဟောပြောသင်ပြထားပါတယ်၊၊
“အဘိဓမ္မာပိဋက”မှာတော့ သတ္တ၀ါတစ် ဦး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းထားပုံ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းထားပုံများအပြင် လေးနက်သည့် အတွေး အခေါ်များ၊ စိတ်ပညာရပ်များကို သင်ပြထားပါတယ်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတာ နှစ်ပေါင်း(၂၅၀၀)ကျော်လာပါပြီ၊ ခေတ်စနစ်ပေါင်းများစွာ ခြားခဲ့ ပါပြီ၊၊ ဒီလို ခေတ်တွေ လူနေမှုစနစ်တွေ မတူတော့တဲ့အခါ ယဉ်ကျေးမှုပုံစံ၊ ရိုးရာပုံစံ၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်ပုံစံတွေ၊ အတွေးခေါ် အယူအဆတွေ၊ ယုံကြည်မှုပုံစံများပါ မတူဖြစ်လာပါတယ်၊၊
မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်က သူ့ခေတ် သူ့အခါအလျောက် ဟောကြားချက်တွေ၊ သင်ပြချက်တွေကို ခေတ်သစ် စနစ်သစ်လူသားတို့ နားလည်ရခက်လာပါတယ်၊ တချို့ဟောကြားချက်များကို လုံးဝနား မလည်နိုင်သည်အထိ ဖြစ်လာပါတယ်၊၊
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ နားလည်ရခက်တဲ့ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ သင်ပြချက် ဟောပြောချက်များကို ခေတ်အခါ အလျောက် နားလည်ရလွယ်အောင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ရေးပြထားတဲ့ ပါဠိစာပေကျမ်းများ ပေါ်ထွက်လာ ပါတယ်၊၊ ထိုကျမ်းများကို အဋ္ဌကထာလို့ခေါ်ပါတယ်၊၊ ပိဋကသုံးပုံလုံးအတွက် အဋ္ဌကထာကျမ်းပေါင်း (၅၁)အုပ်ရှိတယ်လို့ ပါဠိစာပေသမိုင်းမှာ လေ့လာရပါတယ်၊၊
အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Commentary လို့ခေါ်မည် ထင်ပါသည်၊၊ မြတ်စွာဘုရား သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်က မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့် မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့် ကြီးများ ဟောပြောသင်ပြသည့် ပါဠိစာပေကို “ပါဠိတော်”လို့ နာမည်သုံးနှုံးပြီး၊ မြတ်စွာဘုရား လွန်တော်မူပြီး ခေတ်ပေါင်းများစွာကြာမှ ပေါ်ထွက်လာသည့် ပါဠိစာပေများကိုတော့ အဋ္ဌကထာလို့ အမည်သုံးနှုံး ပါတယ်၊၊
အဋ္ဌကထာဆိုတဲ့ကျမ်းများက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ရှင်းပြထားသည့်တိုင် နားလည်ရခက်နေသေးသည့် ပါဠိတော်ပုဒ်များ၊ ရှင်းမပြဘဲကျန်နေသေးသည့် ပါဠိတော်ပုဒ်များကို အဓိပ္ပါယ်ထပ်မံ ရှင်းပြထားသည့် ကျမ်းများလည်း ပေါ်ထွက်လာပါတယ်၊ ထိုကျမ်းများကိုတော့ “ဋီကာ”လို့ခေါ်ပါတယ်၊၊
ပိဋကသုံးပုံအတွက် ဋီကာကျမ်းပေါင်း အုပ်ရေ(၂၆)အုပ်ရှိတယ်လို့ လေ့လာရပါတယ်၊၊ အဋ္ဌကထာနှင့် ဋီကာကျမ်းများသည် ပါဠိတော်ထက် စာအုပ်ဆိုက်များစွာ ကြီးပါတယ်၊၊
၁. ပါဠိတော် အုပ်ရေ (၄၀)၊
၂. အဋ္ဌကထာ အုပ်ရေ (၅၁)၊
၃. ဋီကာအုပ်ရေ (၂၆)၊ တို့သည် ပါဠိစာပေ၏ Primary Sources များအဖြစ် ပါဝင်ပါတယ်၊၊
ဗုဒ္ဓဘာသာကို စနှစ်တကျ နားလည်သဘောပေါက်လိုသူများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘယ်လိုဘာသာမျိုးလဲဟု အသေးစိတ် သိလိုသူများအနေဖြင့် သူများပါးစပ်ဖျားတွင် လမ်းဆုံးမနေဘဲ အရှင်တင်ပြထားသည့် ဤကျမ်းကြီးများကို ပါဠိဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဘာသာပြန်အကူ အညီဖြင့်ဖြစ်စေ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ သင့်ပါတယ်၊၊
ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများအထဲတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် စာပေခိုင်မာ၊ သမိုင်းအထောက်ထား ခိုင်မာသည့် ဘာသာတခုဖြစ်ကြောင်း ပါဠိစာပေနှင့် ဗုဒ္ဓစာပေကို အသေးစိတ်လေ့လာသော “ရိုင်းဒေး ဗစ်”စသည့် အနောက်တိုင်း ပညာရှင်များ၊ The light of Asia စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့သည့် “ဆာအက် ဒ၀င် အာနိုး”စသူတို့က ဆိုပါသည်၊၊
ပါဠိစာပေသည် ဤမျှကျယ်ပြန့် နက်နဲပါတယ်၊၊ အပေါ်တွင်ရေတွက်ပြထားချက်သည် ပါဠိဘာသာနှင့် စာအုပ်အရေအတွက် ဖြစ်သည်၊ ထိုပါဠိကို ဘာသာပြန်ထားသည့် မြန်မာပြန်စာအုပ်အရေအတွက်မှာ ထို့ထက် များပါသည်၊၊
ပိဋကသုံးပုံလုံးနီးနီးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့လည်း ပြန်ဆိုထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ကမ္ဘာ့ဘာသာ World Religion တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် စာပေနယ်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစားများတွင် လေ့လာရပါသည်၊၊
ဤပါဠိစာပေကိုပင် တက္ကသိုလ်ကြီးများဖွင့်လှစ်၍ နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှာ သင်ကြားနေကြရပါတယ်၊၊ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင်လည်း Buddhist Literature Studies ကို Main Faculties များအဖြစ် သင်ကြား နေကြရကြောင်း သိရပါတယ်၊၊
တက္ကသိုလ်ကြီးတွင် ကမ္ဘာ့စာပေတရပ်အနေဖြင့် သင်ကြားရ လောက်အောင်လည်း အဆင့်မြင့်သည့် စာပေဖြစ်ပါသည်၊၊ ပါဠိစာပေမှာ လုံးဝမပါဝင်သည့် Arts and Imformations ဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ သုတေသနပြုပြီး လက်ဆင့်ကမ်း အဆင့်မြှင့်ပြီးသာ အသုံးပြုနိုင်ကြ မယ်ဆိုရင် ယ္ခုထက်များစွာ တိုးတက်ပြီး လူတို့အကျိုးများဖွယ်ရှိပါတယ်၊၊
ပါဠိတော်စာရင်း၊ အဋ္ဌကထာစာရင်းနှင့် ဋီကာစာရင်းများထဲတွင် မပါဝင်ဘဲ သီးခြားတည်ရှိနေသည့် ကျမ်းကြီးများ ရှိပါသေးတယ်၊၊ ထိုကျမ်းကြီးများကတော့ မူလဋီကာကျမ်းများ၊ အနုဋီကာကျမ်းများ၊ မဓုဋီကာကျမ်းများ၊ ယောဇနာကျမ်းများ၊ ဂဏ္ဍိကျမ်းများ၊ ဒီပနီကျမ်းများ၊ ဆိုရိုးကျမ်းများ၊ အရကောက်ကျမ်းများ ဖြစ်ပါတယ်၊၊
ထိုကျမ်းကြီးများမှာ ပိဋကသုံးပုံထက်ပင် အုပ်ရေ အရေအတွက် များပါသည်၊၊ ဤကျမ်းကြီးများမှာ ပါဠိစာပေဖြင့်ရေးသားထားသည့် ကျမ်းကြီးများ ဖြစ်သောကြောင့် ပါဠိစာပေဆိုသည့် Frame ထဲတွင် ထည့်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်၊၊ ပါဠိစာပေနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း လေ့လာလိုသူများအနေဖြင့် ဤကျမ်းကြီးများကို Secondary Sources များအဖြစ် လေ့လာရမည် ဖြစ်ပါသည်၊၊
မျက်မှောက်ခေတ်တွင် “ဒေးကာနယ်ဂီ,စင်မြူရယ် စမိုင်း”တို့၏ မိတ္တဗလဋီကာကဲ့သို့သော တက်ကျမ်း များ များစွာရေပန်းစားသည်ကို သတိပြုမိသည်၊၊ ဗုဒ္ဓစာပေ (ခေါ်) ပါဠိစာပေတွင် ထိုကဲ့သို့ ကျမ်းများ လည်း ရှိပါသည်၊၊ ထိုကျမ်းများကို နီတိစာပေဟု ခေါ်ပါသည်၊၊ လောကနီတိစသည့် ကျမ်းများ ဖြစ်သည်၊၊ ပါဠိဘာသာဖြင့်ရေးသော ကျမ်းပင်ဖြစ်သောကြောင့် နီတိစာပေကိုလည်း ပါဠိစာပေထဲတွင် ထည့်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်၊၊
ပါဠိစာပေထဲတွင်နောက်ဆုံး ကျန်နေသေးသည့် ကျမ်းများမှာ “၀ံသကျမ်း”များ ဖြစ်ပါသည်၊၊ သာသနာ ၀ံသ၊ မဟာဝံသ၊ ဗောဓိဝံသ၊ ဒါဌာဝံသ၊ ဒီပ၀ံသ၊ ထူပ၀ံသစသည်ဖြင့် “၀ံသ”ကျမ်းပေါင်း(၅၀)ကျော် ရှိသည်ဟု ပါဠိစာပေသမိုင်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်၊၊ မြန်မာပြည်တွင်မူ “၀င်ကိုး ၀င်” တတ်ရင် စာတတ်သည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်၊၊
ဤ၀ံသကျမ်းများသည်လည်း ပါဠိဘာသာဖြင့် ရေးသားထား သောကျမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ပါဠိစာပေစာရင်းတွင် မှတ်သားရပါမည်၊၊ “၀ံသစာပေ”သည် ပါဠိစာပေနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာ လိုသူများအတွက် Sub-secondary Sources အနေဖြင့် လေ့လာရန်လိုအပ်သော စာပေအမျိုးအစား ဖြစ်သည်၊၊ ၀ံသစာပေသည် ပါဠိတော်ကဲ့သို့ အဋ္ဌကထာ ကျမ်းများ၊ ဋီကာကျမ်းများအထိပင် ရှိသည်၊၊ ၀ံသစာပေသည် အဓိကအားဖြင့် သမိုင်းအချက် အလက် များကို ဖော်ပြထားသော ကျမ်းများဖြစ်ပါသည်၊၊
သီရိလင်္ကာပါဠိစာပေတွင် ၀ံသကျမ်းပေါင်း(၅၀)ကျော်ရှိသည်ဟု သိရသည်၊၊ ယနေ့အချိန်အထိ ဤ၀ံသကျမ်းများကို တလေးတစား သင်ယူနေကြသည်ကို အရှင်ကိုယ်တိုင်ပင် သီရိလင်္ကာ Sunday School နှင့် ပရိဝေဏ (ခေါ်) စာသင်တိုက်ကြီးများတွင် တွေ့ခဲ့ရပါသည်၊၊
ပါဠိတော်၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာနှင့် ၀ံသစာပေများကို သင်ကြားရလွယ်ကူအောင် စီရင်ထားသော ပါဠိသဒ္ဒါကျမ်းများစွာလည်း ရှိပါသည်၊၊ Pᾶli Grammar ဟု မှတ်သားရပါမည်၊၊ ထင်ရှားသော ပါဠိသဒ္ဒါကျမ်းများမှာ ကစ္စည်းသဒ္ဒါကျမ်း၊ ပါဏိနိသဒ္ဒါကျမ်း၊ မောဂ္ဂလာန်သဒ္ဒါကျမ်း၊ သဒ္ဒနီတိဓာတု မာလာ သဒ္ဒါကျမ်း၊ ရူပသိဒ္ဓိ သဒ္ဒါကျမ်းစသည်တို့ ဖြစ်သည်၊၊ ပါဠိဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော သဒ္ဒါကျမ်းပေါင်း (၂၀)ခန့် ရှိသည်ဟု ကြားဖူးပါသည်၊၊ ယ္ခုအခါအချို့ ပါဠိသဒ္ဒါကျမ်းများမှာ အစအနရှာ မရ တော့ချေ၊၊ (အချို့သဒ္ဒါကျမ်းများမှာ သက္ကတမူများ ဖြစ်သည်၊၊)
စင်စစ် ပါဠိသဒ္ဒါဟူသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့သော ပါဠိတော်များ မဟုက်ချေ၊ ရှေးခေတ် ပါဠိပညာရှင် ဆရာတော်ကြီးများမှ ပါဠိစာပေ သမုဒြာကိုကူးခတ်ရင်း တူရာတူရာ ပါဠိအသွားအလာ နှင့် ပါဠိပုဒ်ပုံစံ စနစ်များကို ထုပ်နှုတ်မှတ်သားခဲ့ရာမှ ပါဠိလိုမှတ်သားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် နောင်အခါတွင် ကျမ်းအဆင့် ထိရောက်လာပြီး၊ ပါဠိစာပေတတ်လိုလျင် ပါဠိသဒ္ဒါကို အရင်တတ်အောင် သင်ရသည်အထိ ဖြစ်လာတော့သည်၊၊ အမှန်မှာ ပါဠိစာပေကို လေ့လာရာမှ ပါဠိစာပေ စနစ်ကို သိလာခြင်းသာ ဖြစ်သည်၊၊ ပါဠိသဒ္ဒါတတ်ပြီးမှ ပါဠိစာပေတတ်ခြင်း မဟုက်ဘဲ၊ ပါဠိစာပေတတ်ရာက ပါဠိစာပေ တည်ဆောက်ထားပုံ သဒ္ဒါဟူသည်ကို သဘောပေါက် နားလည်လာခြင်းဖြစ်သည်၊၊
ယနေ့ခေတ်တွင်မူ “သဒတ်မတာ စပ်မတာ၊ သဒါတတ်မှ စာတတ်သည်” ဟူ၍ ပါဠိစာပေကို အစလေ့ လာသူတို့ လွဲမှားစွာ သဘောပေါက်နေကြသည်မှာ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်၊၊ ဤကဲ့သို့သော ဆိုရိုးများကို အလေးဂရုပြုလွန်းပြီး ပါဠိသဒ္ဒါစာမေးပွဲကြီးများစွာကျင်းပ၍ သဒ္ဒါကျမ်းများကိုချည်း အာရုံစိုက်နေရ သောကြောင့် ပါဠိစာပေလေ့လာသော ပါဠိစာသင်သူအချို့မှာ တကယ့်ပါဠိစာပေကို လေ့လာသည့် အဆင့်အထိ မရောက်ဘဲ၊ ပါဠိသဒ္ဒါပင်လယ်တွင် နစ်မျောကြသည်ကိုလည်း အရှင်တို့မြန်မာ ပါဠိပညာ ရေးတွင် ရင်လေးစွာ တွေ့မြင်ရပါသေးသည်၊၊
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် ပါဠိသဒ္ဒါကျမ်း များများမရှိ၊ များစွာလည်း မသင်ယူကြပါ၊ သို့သော် ပါဠိစာပေ အရာတွင် မြန်မာရဟန်းတော်များထက် သာလွန်သည်ကို ထေရာဝါဒနိုင်ငံအားလုံး သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ ငွေကုန် ကြေးကျခံပြီး ပညာသင်လာရောက် နေကြသည်က သက်သေပြုနေပါသည်၊၊ ကမ္ဘာသို့ ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် ဗုဒ္ဓစာပေကို ဖြန့်ဖြူးရာတွင်လည်း သီရိလင်္ကာသားတို့က အခြားထေရာဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာ သာ နိုင်ငံသားများထက် များစွာပင်ရှေ့ရောက်သည်ကို လက်တွေ့အားဖြင့် ၀န်ခံရပေမည်၊၊
၇. မြန်မာပြန် ပိဋကသုံးပုံ၊
၈. အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ပိဋကသုံးပုံဟူ၍ တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်၊၊
စာဖတ်သူများ အထက်တွင် ပါဠိတော်စာအုပ်ရေ(၄၀)ရှိသည်ဟု အရှင်တင်ပြခဲ့သည်ကို မှတ်မိမည် ထင်ပါသည်၊၊ ထိုပါဠိတော် အုပ်ရေ(၄၀)မှ ပါဠိတော် အုပ်ရေ(၂၀)ကို အလွတ်အာဂုံနှင့် သဘောရေးဖြေ အောင်မြင်စွာ ပြန်ဆို၊ ဖြေကြားနိုင်လျင် “တိပိဋကဘွဲ့”ကို မြန်မာပြည်တွင် ပေးအပ်ပါသည်၊၊
တိပိဋက စာမေးပွဲအတွက် ပါဠိတော်အုပ်ရေ လေးဆယ်မှ အုပ်ရေနှစ်ဆယ်ကို ရွေးချယ်ပြီး၊ နှုတ်တက်အာဂုံနှင့်၊ သဘောအဓိပ္ပါယ်ရေးဖြေ စာမေးပွဲကြီးကို မြန်မာပြည်တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပ ပါသည်၊၊ စာမေးပွဲဖြေဆို သည့် ရက်ပေါင်း (၃၃)ရက် ကြာသည်ဟုလည်း တိပိဋကမှတ်တမ်းများတွင် လေ့လာရပါသည်၊၊ အရှင် လေ့ လာမိသမျှ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင်လည်း “တိပိဋကာစရိယ”ဆိုသော စာမေးပွဲကြီးရှိပါသည်၊ အလွန် ခက်ခဲသည့် စာမေးပွဲကြီး ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရပါသည်၊၊
(၁၃၁၀)ခု မှစတင်ခဲ့သော တိပိဋကစာမေးပွဲကြီးသည် (၁၃၇၂)ခု၊ ယနေ့ဆိုလျင် နှစ်ပေါင်း(၆၂)ရှိခဲ့ပြီ၊ ဤမျှကြာသောနှစ်များအတွင်း တိပိဋကစာမေးပွဲအောင်သမြင့် တိပိဋကဘွဲ့ရရှိသွားသော မြန်မာရ ဟန်းတော်ပေါင်း(၁၂)ပါးမျှ ရှိသည်ဟုလည်း ဆိုပါသည်၊၊ တိပိဋကစာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုရသော သင်ရိုးပိဋက အုပ်(၂၀)မှာ---
(၁) ပါရာဇိကဏ် ပါဠိတော် (၁)အုပ်၊ စာမျက်နှာ
(၂) ပါစိတ် ပါဠိတော် (၁)အုပ်၊
(၃) မဟာဝါ ပါဠိတော် (၁)အုပ်၊
(၄) စူဠ၀ါ ပါဠိတော် (၁)အုပ်၊
(၅) ပရိဝါ ပါဠိတော် (၁)အုပ်၊ စုစုပေါင်း (၅)အုပ်၊ စာမျက်နှာ(၂၂၆၀)ဖြစ်ပါသည်၊၊
(၁) သုတ်သီလက္ခန် ပါဠိတော် (၁)၊ စာမျက်နှာ(၂၃၆)၊
(၂) သုတ်မဟာဝါ ပါဠိတော် (၁)၊ စာမျက်နှာ(၂၈၃)၊
(၃) သုတ်ပါဌေယျ ပါဠိတော် (၁)၊ စာမျက်နှာ(၂၆၀)၊ စုစုပေါင်း (၃)အုပ်၊စာမျက်နှာပေါင်း(၇၇၉) ဖြစ်ပါသည်၊၊
(၁) ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် (၁)အုပ်၊ စာမျက်နှာ(၂၈၉)၊
(၂) ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော် (၁)အုပ်၊ စာမျက်နှာ(၄၅၃)၊
(၃) ဓာတုကထာပါဠိတော်၊ ပုဂ္ဂလပညတ်ပါဠိတော် (၁)အုပ်၊ စာမျက်နှာ (၁၀၀+၈၅=၁၈၅)၊
(၄) ကထာဝတ္ထုပါဠိတော် (၁)အုပ်၊ စာမျက်နှာ(၄၉၃)၊
(၅) ယမိုက်ပါဠိတော် (၃)အုပ်၊ စာမျက်နှာ(၉၀၄)၊
(၆) ပဌာန်းပါဠိတော် (၅)အုပ်၊ စာမျက်နှာ(၃၅၉၇)၊၊ စုစုပေါင်း(၁၂)အုပ်၊ စာမျက်နှာပေါင်း(၄၉၉၈)၊ ဖြစ်ပါသည်၊၊
ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့် ပါဠိတော်သက်သက် အုပ်ရေ (၂၀)၊ စာမျက်နှာ(၈၀၀၀)ကျော်ခန့်ကို သင်ရိုးပိဋကတ်ဟု ခေါ်စမှတ်ပြုပါသည်၊၊ ကျန်နေသေး သည့် ပါဠိတော် အုပ်ရေ(၂၀) ကို ကျမ်းအိပ်ဟု ခေါ်တွင်ကြောင်းလည်း မှတ်သားရပါသေးသည်၊၊ တိပိဋကစာမေးပွဲတွင် မပါဝင်ဘဲ ကျန်နေသည့် ကျမ်း(၂၀)မှာ---
(၁) မဇ္ဈိမနိကာယ်မှ ပဏ္ဏာသသုံးကျမ်း (၃)အုပ်၊
(၂) သံယုတ္တနိကာယ်မှ ငါးကျမ်း (၃)အုပ်၊
(၃) အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်မှ ဆယ့်တစ်ကျမ်း (၃)အုပ်၊
(၄) ခုဒ္ဒကနိကာယ်မှ ဆယ့်ကိုးကျမ်း (၁၁)အုပ်၊ စုစုပေါင်း အုပ်ရေ(၂၀)ဖြစ်ပါသည်၊၊
တိပိဋက စာမေးပွဲ တွင် မပါဝင်သည့်အတွက် ကျက်မှတ်သူမရှိ၍ ကျမ်းအိပ်ဟု ခေါ်တွင်နေသည့် ဤကျမ်း(၂၀)ကို ယ္ခုအခါတွင် မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးသီရိန္ဒစသည့် ဆရတော်ကြီးများဦးစီး၍ “နိကာယ် စာမေးပွဲ” ကြီးများ ကျင်းပပြီး အသက်ဝင်သော ကျမ်းကြီးများဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားနေကြသည်ဟုလည်း ပါဠိ စာပေ အကဲခပ်သူများက ဆိုပါသည်၊၊
+ မဇ္ဈိမနိကာယ် မှ ပဏ္ဏာသ(၃)အုပ် ဟူသည်မှာ +
(၁) မူလ ပဏ္ဏာသ (၁)အုပ်၊
(၂) မဇ္ဈိမ ပဏ္ဏာသ (၁)အုပ်၊
(၃) ဥပရိ ပဏ္ဏာသ (၁)အုပ်၊ စုစုပေါင်း (၃)အုပ်ဖြစ်ပါသည်၊၊
+ သံယုတ္တနိကာယ်မှ ငါးကျမ်း (၃)အုပ် ဟူသည်မှာ +
(၁) သဂါထာဝဂ္ဂ္ဂ သံယုတ် (၁)အုပ်၊
(၂) နိဒါန၀ဂ္ဂ၊ ခန္ဓ၀ဂ္ဂ သံယုတ် (၁)အုပ်၊
(၃) သဠာယတန၀ဂ္ဂ၊ မဟာဝဂ္ဂ သံယုတ် (၁)အုပ်၊ စုစုပေါင်း(၃)အုပ် ဖြစ်ပါသည်၊၊
+ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်မှ ဆယ့်တစ်ကျမ်း(၃)ဟူသည်မှာ +
(၁.၂.၃) ဧကက နိပါတ်မှစ၍ ဧကာဒသက နိပါတ်အထိ (၃)အုပ် ဖြစ်ပါသည်၊၊
+ ခုဒ္ဒကနိကာယ်မှ ဆယ့်ကိုးကျမ်း(၁၁)အုပ် ဟူသည်မှာ +
(၁) ခုဒ္ဒကပါဌ ပါဠိ၊
(၂) ဓမ္မပဒ ပါဠိ၊
(၃) ဥဒါန ပါဠိ၊
(၄) ဣတိဝုတ္တက ပါဠိ၊
(၅) သုတ္တနိပါတ ပါဠိ၊
(၆) ၀ိမာန၀တ္ထု ပါဠိ၊
(၇) ပေတ၀တ္ထု ပါဠိ၊
(၈) ထေရဂါထာ ပါဠိ၊
(၉) ထေရီဂါထာ ပါဠိ၊
(၁၀) ဇာတက ပါဠိ၊
(၁၁) နိဒ္ဒေသ ပါဠိ၊
(၁၂) ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂ ပါဠိ၊
(၁၃) အပါဒါန ပါဠိ၊
(၁၄) ဗုဒ္ဓ၀ံသ ပါဠိ၊
(၁၅) စရိယာပိဋက ပါဠိ၊
(၁၆) နေတ္တိ ပါဠိ၊
(၁၇) ပေတကောပဒေသ ပါဠိ၊
(၁၈) မိလိန္ဒပဥှာ ပါဠိ၊
(၁၉) သုတ္တသင်္ဂဟ ပါဠိ၊ စုစုပေါင်း (၁၉)အုပ် ဖြစ်ပါသည်၊၊
ဤစာတမ်းတွင် အရှင်တင်ပြ ရေတွက်ပြခဲ့သည်မှာ ပါဠိတော်အုပ်ရေ (၄၀)ကို အဓိကတင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ အဋ္ဌကထာ အရေတွက်နှင့် ဋီကာစသည်တို့၏ စာရင်းအတိအကျကိုလည်း အရှင်ကြိုးစားပါအုံးမည်၊၊
အရှင် ပါဠိစာပေမိတ်ဆက်ကို တင်ပြလာခဲ့သည်မှာ ဤမျှဆိုလျင် အတိုင်းအတာတခုအထိ ပြည့်စုံပြီ ဟု ယူဆပါသည်၊၊ အရှင့်ထက် ပါဠိစာပေ တတ်ကျွမ်းသည့် ပါဠိပညာရှင်များအနေဖြင့် ဤစာတမ်းတွင် မှားယွင်းမှု တစုံတရာ၊ လွဲချော်မှုတစုံတရာတွေ့ခဲ့ပါလျင် အကြံပြုဆွေးနွေးဖို့ တောင်းပန်လိုက်ပါသည်၊၊
ပါဠိစာပေကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေ့လာသုတေသနပြုလိုသူများ အနေဖြင့် အရှင် တင်ပြခဲ့သည်များမှ ခြေရာခံပြီး ဆက်လက်လေ့လာရန်ဖြစ်ပါသည်၊၊ အရှင်၏တင်ပြမှာမှုမှာ ဗုဒ္ဓစာပေ ကို တကယ်လေ့လာ သုတေသနပြုလိုသူအတွက် သေးငယ်သည့် အကူလေးမျှသာ ဖြစ်ပါသည်၊၊
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဗုဒ္ဓစာပေဟူသည်ကို ဘာမှန်းမသိဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်လွှတ်ပြီး၊ အခြားဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကြသည့် မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို “အလင်း စက်”၏ ပါဠိစာပေ မိတ်ဆက်က အကျိုးတစုံတရာ ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု အရှင်ယုံကြည်ပါသည်၊၊ လေ့လာလိုသူများအတွက် အဋ္ဌကထာစာရင်းကို နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်၊၊
(၁) ၀ိနယ ပိဋကပါဠိ > သမန္တပါသာဒိကာအဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၂) ပါဋိမောက္ခပါဠိ> ကင်္ခါဝိတရဏိအဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၁) ဒီဃနိကာယပါဠိ >သုမင်္ဂလ၀ိလာသိဏီအဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၂) မဇ္ဈိမနိကာယပါဠိ > ပပဉ္စသူဒနီအဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၃) သံယုတ္တနိကာယပါဠိ > သာရတ္ထပ္ပကာသိနီ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၄) အင်္ဂုတ္တရနိကာယပါဠိ > မနောရတ္ထပူရဏီအဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၁) ခုဒ္ဒကပါဌပါဠိ > ပရမတ္ထဇောတိကာအဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၂) ဓမ္မပဒပါဠိ > ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာအဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၃) ဥဒါနပါဠိ > ပရမတ္ထဒီပနီအဋ္ဌကထာ (ဓမ္မပါလ)
(၄) ဣိတိဝုတ္တကပါဠိ > ပရမတ္ထဒီပနီအဋ္ဌကထာ(ဓမ္မပါလ)
(၅) သုတ္တနိပါတ ပါဠိ > ပရမတ္ထဒီပနီအဋ္ဌကထာ( ဓမ္မပါလ)
(၆) ၀ိမာန၀တ္ထုပါဠိ > ပရမတ္ထဇောတိကာအဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၇) ပေတ၀တ္ထုပါဠိ > ပရမတ္ထဒီပနီ အဋ္ဌကထာ (ဓမ္မပါလ)
(၈) ထေရဂါထာပါဠိ > ပရမတ္ထဒီပနီ အဋ္ဌကထာ(ဓမ္မပါလ)
(၉) ထေရီဂါထာပါဠိ> ပရမတ္ထဒီပနီ အဋ္ဌကထာ(ဓမ္မပါလ)
(၁၀) ဇာတကပါဠိ > ဇာတကအဋ္ဌကထ (ဓမ္မပါလ)
(၁၁) နိဒ္ဒေသ ပါဠိ> သဒ္ဓမ္မပဇ္ဇောတိကာ အဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၁၂) ပဋိသမ္ဘီဒါမဂ္ဂပါဠိ > သဒ္ဓမ္မပ္ပကာသိနီအဋ္ဌကထာ (ဥပသေန)
(၁၃) အပါဒါနပါဠိ> ၀ိသုဒ္ဓဇန၀ိလာသိနီ အဋ္ဌကထာ (အမည်မသိ)
(၁၄) ဗုဒ္ဓ၀ံသပါဠိ > မဓုရတ္ထ၀ိလာသိနီအဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဒတ္တ)
(၁၅) စရိယာပိဋကပါဠိ > ပရမတ္ထဒီပနီ အဋ္ဌကထာ (ဓမ္မပါလ)
(၁) ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိ > အတ္ထသာလိဏီ အဋ္ဌကထာ ( ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၂) ၀ိဘင်္ဂပါဠိ > သမ္မေဟ၀ိနောဒနီအဋ္ဌကထာ ( ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၃) ကထာဝတ္ထုပါဠိ > ပဉ္စပ္ပကရဏအဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၄) ပုဂ္ဂလပညတ္တိပါဠိ > ပဉ္စပ္ပကရဏအဋ္ဌကထာ(ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၅) ဓာတုကထာပါဠိ > ပဉ္စပ္ပကရဏအဋ္ဌကထာ(ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၆) ယမကပါဠိ > ပဉ္စပ္ပကရဏအဋ္ဌကထာ(ဗုဒ္ဓဃောသ)
(၇) ပဋ္ဌာနပါဠိ > ပဉ္စပ္ပကရဏအဋ္ဌကထာ (ဗုဒ္ဓဃောသ)
အရှင်အနေဖြင့် Religion ခေါ် ကိုးကွယ်မှု ဘာသာတိုင်းတွင် စာပေရှိသည်၊ ထိုစာပေများကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီး၊ လက်တွေ့ကျသည်၊ အကျိုးအကြောင်း ခိုင်လုံသည်၊ အစစ်ဆေး အစမ်းသတ် ခံနိုင်သည်၊ ယုတ္တိရှိသည်ဟု ကိုယ်တိုင်သိပြီးမှသာ ကိုးကွယ်မှုကို ရွေးချယ်သင့်ကြောင်း တင်ပြအကြံပြု လိုပါသည်၊၊ မည်သည့်ဘာသာသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်ဟုကား အရှင့် ဉာဏ်ဖြင့် မဆုံးဖြတ်ဝံ့ပါ၊၊ “အလင်း စက်” စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ စာပေဖြင့်အလှဆင်ပြီး၊ စာပေဖြင့်ပင်ဘ၀ကို တည်ဆောက် အောင်မြင်ကြပါစေ..………..!
အရှင်ကေ၀လ (အလင်း စက်)
(မှတ်ချက်/ တိပိဋကဓရ ရွှေရတုစာစောင်(၁၃၁၀-၁၃၆၀)၊ တိပိဋက ပါဠိစာပေသမိုင်း (မိုင်းခိုင်းမြို့ စားကြီး)၊ Guide to Tipitaka by U Kolay,A hand book of Lᾶli Literature by Oskar von Hinuber,The Pᾶli Literature of Ceylon by G.P.Malalasekera တို့ကို ကိုးကားပြီး ၍စာတမ်းကို ရေးပါသည်၊၊)
Posted by အလင်း စက် at 4:25 AM
Arkar Moe Thu March 1, 2019 at 8:03 PM